July 2, 2019 - Alin-U-Yin
All Posts in "Day: July 2, 2019"
What is the purpose of human life? (Myanmar Subtitle)
ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာဘာလဲ? ******************************************* ကမ္ဘာဦးအစ လူသားဖြစ်တဲ့ အာဒမ်(အ)ကိုဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့အချိန်မှစပြီး ယနေ့ထိလူသားများရှင်သန်ရပ်တည်နေထိုင်နေကြဆဲ။ အဲဒီလူသားတွေကို ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရသလဲဆိုတာကို အစ္စလာမ့်ရှုထောင့်အရ ဒီဗီဒီယိုလေးက ရှင်းပြထားပါတယ်။
by Nyan Alinn — July 2, 2019 in အတွေးအမြင် 0
ဂိမ်းကစားနည်းများနှင့် ကလေးကစားစရာများ (ဒေါက်တာသက်ဝင်း(မိုးစွေ)/ကလေးကဏ္ဍ) June 17, 2017
နယူးဇီလန်၌ ဗလီကို အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခြင်းအပေါ် ဆရာကြီးဂူလန်၏ဝမ်းနည်းကြေကွဲကြောင်းသဝဏ်လွှာ March 18, 2019